मनोविज्ञान र सम्बन्ध क्यारियर
वेतन वृद्धि तपाईंको क्यारियरको विकासको सूचक हो। भाडाको लागि काम गर्ने अधिकांश मानिसहरू उनीहरूको वेतनसँग सन्तुष्ट छैनन्। तिनीहरूले वर्षको लागि एक काममा काम गरेका छन्, र उनीहरूको वेतन लगभग असम्भव छ। यदि यो तपाईंको बारे हो भने, तपाइँ अधिकारहरू तपाईंको अप्ठ्यारो अनुमान गर्न प्रतीक्षाको लागि छैन। यस लेखमा, तपाईंले सिकाउनुहुनेछ कि तपाईंले आफ्नो वेतन बढाउनु भएको छैन र तपाईंको वेतन कसरी सही ढंगले बढाउनुहुन्छ।
यसले बाहिर निस्कन्छ कि व्यवस्थापनमा कारणले तपाईंको वेतन बढाउन नसक्ने हुन्छ। सायद तपाईं नियोक्ता को चाल मध्ये एक मा पकडिएको छ, जो केवल सस्तो श्रम खोज्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो वेतन किन बढाउनुहुन्न?
तपाईं आफ्नो मूल्य थाहा छैन। साक्षात्कारमा तिनीहरूले तपाईंलाई अधिक अयोग्य छन् कि तपाईं भन्नुभयो। यो विचार तपाईंको मालिक द्वारा समर्थित छ, र तपाइँले पहिले नै विश्वास गरेन कि त्यहाँ मात्र कुनै राम्रो काम र वेतन छैन।
तपाईंले अझै यो विद्यार्थी भेट्टाए तापनि एक विद्यार्थी र यहाँ बस्नुभयो। अब तपाईंसँग पहिले नै अनुभव र शिक्षा छ, र नियोक्ताका लागि "दौड अज्ञात" व्यक्ति बनेको छ, जसको लागि यो वेतन वृद्धि गर्न आवश्यक छैन।
तपाईंले वेतन वृद्धिको विषय उल्लेख गर्नुहुन्न। यो हुन्छ कि मालिक धेरै व्यस्त छ कि उसले आफ्नो अधीनस्थहरूको वेतन पछ्याउँदैन। या त उनीहरु बाट तपाइँको मौन समझाएको छ, कि सबै केहि तपाईं सूट। त्यसैले कहिलेकाहीं यो सङ्केतको लायक छ कि तपाईं अधिक पैसा पाउन योग्य हुनुहुन्छ। यो राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले पारित हुनेछ, एक राम्रो काम पछि।
प्रायः तपाईं आफ्नो मालिकलाई विभिन्न कारणहरूका लागि सोध्नुहुन्छ, यी धेरै गम्भीर कारणहरू हुन सक्छन्, तर, यस तर्कले तपाईंको पक्षमा होइन, जब तपाईं आफ्नो वेतन वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ।
यो हुन सक्छ कि यो एक नियोक्ता को लागि सबै समय लागु गर्न र प्रशिक्षित गर्न को लागी एक विशेषज्ञ को राख्न को लागि अधिक समय प्रशिक्षित र प्रशिक्षित गर्न को लागी अधिक लाभदायक छ।
वेतन को लागी आवंटन को सबै राशि नहीं, कर्मचारियों सम्म पुग्नुहोस। सडकमा कोषको अंश बैंक, बेवास्ता लेखापाल वा अन्य धोखाधडीबाट हटाउन सकिन्छ।
तपाईंले भन्नुभयो कि तपाई छोड्नु भयो। कम्पनी असोज्य छ जसले व्यक्तिलाई वेलाउने निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई उठाउनेछ। त्यसकारण, तपाइँलाई छोड्नु भएको जानकारी लुकेको छ।
तपाईं धेरै बेकार वा धेरै आर्थिक हुनुहुन्छ। पहिलो अवस्थामा, व्यवस्थापनले निर्णय गर्नेछ कि तपाईंलाई ठूलो रकम चाहिँदैन दोस्रो, दोस्रोमा - जुन तपाईंसँग पर्याप्त हुनेछ।
कसरी मालिक बनाउन आफ्नो वेतन बढाउनुहुन्छ?
वृद्धिको बारेमा नेतृत्व गर्नुहोस्। तपाईंको व्यावसायिकता बढाउन वा कार्यभार वृद्धि गर्न अनुरोधलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्।
तपाईंको काम र भोल्युमहरूको गुणस्तर बढाउनुहोस्, यसलाई अधिकारीहरूलाई ज्ञात बनाउनुहोस्। कार्य ओभरटाइम, प्रशोधनका तथ्याङ्कहरू तय गर्दै।
तपाईंको संगठनको गतिविधिसँग सम्बन्धित क्षितिज र ज्ञानको चौथाई देखाउनुहोस्। यसलाई स्पष्ट गर्नुहोस् कि तपाईं जिम्मेवारीको डर नगर्नु र अतिरिक्त कार्यहरू समाधान गर्न तैयार हुनुहुन्छ।
सिक्नुहोस्, तपाईंको क्षेत्रमा मास्टर न्युन टेक्नोलोजीहरूको नवाचारको बारेमा जान्नुहोस्। नयाँ ज्ञान र सिक्नको लागि तपाईंको इच्छा देखाउनुहोस्।
नयाँ चीजहरूमा गल्तीहरूको नरोक्नुहोस्। अनुभवी कर्मचारीहरु लाई सल्लाह दिनुहोस्।
जब तपाईं मजदूरी बढाने बारे कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ, एक रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्: तपाईले कस्तो लाभ उठाउनुहुन्छ र कसरी उपयोगी संगठनहरू छन्।
त्यहाँ एक कट्टरपंथी तरीका हो कि मालिक कसरी आफ्नो वेतन बढाए - संकेत गर्न को लागी कि तपाईं अर्को फर्म मा जान जा रहे हो। तर पहिले एक नौकरी को लागी हेर्नु भयो जहाँ तपाई साँच्चै जान सक्नुहुनेछ, साक्षात्कारमा जान नसक्ने चोट लाग्दैन, त्यसैले तपाईलाई अधिक भरोसा महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं नचिनेको छैन, र यसबाहेक त्यहाँ कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि तपाइँ कुराकानी पछि हटाइने छैन।
तपाईंले प्रमुखको सहमति सुरक्षित गरे पछि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ वेतन र सम्झौतामा जो कि रोजगार सम्झौतामा संलग्न भएको संलग्नता बढाउन आदेश जारी गरिएको छ, तपाईले कति रकम भुक्तान गर्नुभएको छ, वा तपाईको वृद्धि केवल शब्दहरुमा रहनेछ।
5 कारणहरू रातमा सुत्न सक्दैनन्
आत्माको लागि कसरी काम रोज्नुहुन्छ?
कसरी एक कफी पसल खोल्न र एक व्यवसाय बनाउन लाभदायक छ?
पुन: सुरु गर्ने कसरी लेख्ने?
पहिचान र कर्पोरेट पहिचान निर्माण
खरिदबाट साना व्यवसाय
सानो टाउकोको लागि व्यवसायिक विचार
कुन स्टकहरू अब खरीद गर्न लाभदायक छन्?
इन्टरनेटमा कसरी कमाई - कमाईको 10 भन्दा धेरै लोकप्रिय प्रकारहरू
कर्मचारी प्रेरणाका प्रकारहरू
कसरी बिरामीको लागि छोड्ने?
स्थापना नारंगी रूख
टमाटर र काली मिर्चको बिरुवाको लागि उर्वरक - शीर्ष ड्रेसिङ बनाउने उत्तम तरिका के हो?
चंद्र आहार - चन्द्रको चरणहरूका लागि पोषण वजन घटानेका लागि
महिलाहरु को तल जैकेट
घरको लागि सजावट
हिरण संग जैकेट
Motilac - एनालॉग
हलवा - क्यालोरी सामग्री
केलासँग जिन्जरब्रेड केक
एमएसएच फलोपियन ट्यूबहरू
फैशनेबल शरद ऋतु - सर्दियों स्कर्ट 2017-2018 - फैशन प्रवृत्त र स्टाइलिश उपन्यासहरु
एक महिनाको लागि आहार
बच्चाहरु को लागि लिम्फोमोटोसिस
अभिनेत्री केट हडसन लुगामा लुगा लगाइएको, र मेरी क्लेयरको आवरणको लागि तारांकित
लुम्बोसुकल रीडको डोरोपैथी
साइडर - नुस्खा
सुन्तला र सेबको कम्पन
ग्रीस, कोस आइल्याण्ड